Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo baaq u diray maamul goboleedyada - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo baaq u diray maamul goboleedyada
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo baaq u diray maamul goboleedyada
Afarta Sanatar ee maanta ku guuleystey doorashada ayaa kala ah; Ilyaas Badal Gaboose, Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, Cabdirisaaq Maxamed Cusmaan iyo Iftiin Xasan Iimaan Baasto. Jubbaland ayaa dooran doonta maalmaha soo socda afar xubnood oo kale.
Gudoomiyaha Gudiga Doorashada heer federaal Maxamed Xasan Cirro ayaa ka warbixiyay doorashadii maanta ka dhacday magalada Kismaayo iyo sababta keentay in maamulada kale aysan wali u diyaar garoobin qabashada doorashada Baarlamanka Aqalka Sare.
Waxaa uu sheegay in Madaxda kale ee maamulada ay baaq u direen, islamarkaana looga baahan yahay in ay si deg deg ah u soo gudbiyaan.
Waxaa uu sheegay in doorashada xilligii loogu tala galay ay ku dhici doonto si looga hortago inuu yimaado dib u dhac kale.
Previous articleGuddiga doorashada Koonfur Galbeed oo baaq u diray Madaxweyne Laftagareen
Next articleRooble oo kulan la qaatay Ra’isul Wasaaraha Britain